Indida 'kubhidlizwa' itshe likaMeyiwa - Ilanga News
Home Izindaba Indida ‘kubhidlizwa’ itshe likaMeyiwa
Indida ‘kubhidlizwa’ itshe likaMeyiwa
Umndeni uyalelwe ukuba uthathe izinyathelo zomthetho, uvule icala
NONHLAKANIPHO SHINGA noMZWAMANDLA ZONDI
umndeni uthi “ukubhidlizwa” kwetshe lethuna likaSenzo Meyiwa owayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana kubavusela iminjunju njengoba beslindele ukuba kuboshwe ababulali. ISITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA
UVULA icala umndeni kaSenzo Meyiwa owayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana emuva kokuba wavuswa ngocingo ngoKhisimusi, ubikelwa ngokubhidlizwa kwetshe lethuna lalo nozinti elagxunyekwa yiSAFA ezinyangeni ezimbili ezedlule.
Ibiyindaba egudwini ngoMgqibelo nayizolo ngeSonto indaba yokubhidlizwa kwethuna likaSenzo nelentatheli yodumo, uNathaniel “Nat” Nakasa aseHeroes’ Acre Cemetery, eChesterville, eThekwini.
Kube nemibono ethi lokhu kwenziwe wukuthi amatshe ala mathuna made, kungenzeka ukuba awiswe yizimo zemvelo.
UMnu Sfiso Meyiwa okhulumela umndeni wakwaMeyiwa, utshele ILANGA ukuthi namhlanje ngoMsombuluko bazolibangisa emaphoyiseni bayovula icala ngokubhidlizwa kwaleli tshe.
“Sishaqeke ngendlela eyisimanga ngalokhu okwenzekile. Sithole ucingo obeluvela kuMnu Thembinkosi Ngcobo, ositshele ukuthi sekwenzeke lo monakalo.
“Umuntu owenze le nto kuyabonakala nje ukuthi akaphilile ekhanda ngoba amathuna ayahlonishwa. Sibuyisa iminjunju nasemndenini isenzo esinjengalesi ngoba manje esikufunayo njengomndeni wukuthi kujeze labo ababulala uSenzo,” kusho yena.
UMnu Ngcobo oyinhloko kwezamapaki nezokungcebeleka kuMasipala weTheku, uthe lesi senzo kasibonakali kungesemvelo kepha kubonakala kuyisandla somuntu.
“Siphoxeke kakhulu ngalesi senzo. Yize amathuna egadwa kepha akekho umuntu ohlala khona ubusuku nemini, kuyavalwa nje emasangweni ebusuku bese kuyavulwa ekuseni.
“Lesi senzo siyabonakala nje ukuthi ngesomuntu obeyazi into ayenzayo, yize kugcine kuthinteka nelentatheli eyaziwayo, uMnu Nat Nakasa esingazi ukuthi lithinteke kanjani. Kunophenyo esizolwenza ukuze sithole ukuthi kwenzekeni ngempela.
“Siyanxusa nalabo abangaba nolwazi ukuthi basithinte, sibone ukuthi yini esingayenza ngalesi simo. Uma sibona ukuthi kunesidingo, sizobe sesifaka abaqaphi kodwa nakhona kusamele siqale sithole ukuthi yenzeke kanjani le nto,” kusho uMnu Ngcobo.
USihlalo weSafa KwaZulu-Natal, uMnu Kwenzakwakhe Ngwenya, uthe lesi senzo sibaphathe kabi njengenhlangano.
“Kumele sihlangane njengenhlangano, sibone ukuthi singalilungisa kanjani ngoba kasikwazi ukuliyeka linje. Sesikhulumile noMnu Danny Jordan (umengameli weSafa) ngalolu daba nokuthi kuzomele sihlangane sikhulume ngalo.
“Umndeni siyawunxusa ukuba uvule icala ukuze labo abathintekayo, bajeze,” kusho yena.
Previous articleBavale unyaka ngokuwina izindondo
Next articleUkhalela ubisi oluchithekile oweBucs